Manimba zavatra be lavitra sy sarotra noho ny aretina ny tsy fitandremana. Mandray fepetra hentitra ny fitondram-panjakana mba hahafahana mametraka ao an-tsain` ny vahoaka Malagasy fa aretin-mandoza io. Izay no ilàna ny fitoniana sy firaisankina. Na dia eo aza ny vesatra ateraky ny areti-mandoza izay mandripaka ain’olona maro maneran-tany, dia nahatsapa ny rehetra fa misy ny firaisan-kina iraisam-pirenena ary mihamafy ny fifankazahoana eo amin’ny samy mponina eo anatrehan’ity ady sarotra iraisana ity. Azo raisina ho tosika ny firaisankina. Ohatra ny hetsika maneran-tany ho fanoherana ny fanavakavaham-bolon-koditra nanoloana ny famonoana tamin’ny fomba feno habibiana ny mainty hoditra George Floyd tany Minneapolis, Etazonia, tamin’ny 25 mey 2020 lasa teo. Nahatsapa ny rehetra fa nampivoitra sy nanampy tosika ny fanehoan-kevitra ary ny fanoherana eran-tany mikasika ireo zava-manjo tsy rariny sy ny tsindry hazo lena nokobonina hatramin’izay iny tranga iny. Betsaka ny lesona azo tsoahina ho antsika Malagasy mba hirosoana amin’ny fanjakana tsara tantana ary tena manaja ny Zon’olombelona ka mitsinjo ny vahoaka maro an’isa izay voahilika eo amin’ny tombontsoa sy ny zo izay tokony hositrahany. Mila fitoniana sy firaisankina na politika na eo amin` ny samy Malagasy ny fiatrehana izao fotoana sy toe-javatra sarotra izao, ary hahatsapan’ny tsirairay fa manana andraikitra eo anivon’ny fiarahamonina sy ny firenena izy fa tsy hoe olonolom-poana mba sendra velona teto ambonin’ny tany fotsiny.